Yintoni Entsha – 750 AMPED
Bhalisela ukugonywa apha
-Bhukisha kwangaphambili ugonyo lwakho kwi-Intanethi
Indawo yoThintelo kunye noVavanyo
Iindawo zokuvavanyelwa i-COVID 19
Iindawo zokuGonya ezisebenzayo
Ndingenza ntoni ukuba ndicinga ukuba ndine-COVID 19?
Iintetho Zamva Nje
Abasebenzi Abaqinisekisiweyo bophando Olwenziwa ngaphandle
Home » Yintoni Entsha
amaXwebhu aPapashiwe nguRhulumente we-COVID-19
I-750AMPED lunyathelo lomngenelelo lokonyusa amathuba olutsha ekukhuthazweni utshintsho kwindlela yololuntu yokuziphatha ngoqeqesho, ngemfundo nangokwazisa. Ngeli xesha ngaxeshanye ukunciphisa ukwethuka, ukulwa ibala, ulwazi olungeyonyani kunye ne-disinformation ejikeleze i-COVID 19 ngakumbi phakathi koluntu oluhlelelekileyo ekuhlaleni kunye neendawo ekunokubakho usulelo oluphezulus.
iFAQ (Imibuzo Ebuzwa Rhoqo)
Umsebenzi wophando olwenziwa ngaphandle oqinisekisiweyo.
Nceda unxibelelane nathi ngayo nayiphi na indlela yonxibelelwano kwaye ujoyine uHambo loku fika kusulelo elingu 0.
I-copyright © 2020 750AMPED. Onke Amalungelo Agciniwe